About Us - Hangzhou Poly Air Ulwahlulo Equipment Co., Ltd
Hangzhou Poly Air Ulwahlulo Izixhobo ManufacturingCo., Ltd ngumvelisi professional kukhutshwe PSA nitrogen izixhobo ekwenziweni, PSA ioksijini ukwenza izixhobo, VPSA ioksijini izixhobo ekwenzeni, zixinaniswe izixhobo umoya zokuhlanjululwa njl
Le nkampani kudityaniswe R & D, imveliso yoyilo kunye nokuthengisa. ukufanelekela nemiqathango zemveliso ogqibeleleyo, ufakelo izixhobo, uqwalaselo, ulondolozo kunye nenkonzo. Kwakhona baqesha ingcali endle kweziveliso eziphathekayo kunye nobunjineli omtsha obizwa njengomcebisi yobugcisa ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu kunye nobugcisa kusoloko kumgca ubuchwepheshe nokubonelela siqinisekiso ethembekileyo lwenzululwazi design product nelezemveliso. ngokwahlukana umoya Sinopoly nekungoku ingxamele ukuba inkokeli zobugcisa kumnombo zokuhlanjululwa umoya kunye noxinzelelo swing adsorption.
iimveliso kweNkampani ikakhulu yahlulwe: PSA nitrogen (oksijini) nezixhobo, VPSA izixhobo ioksijini analytical, ezincamathelayo izixhobo zokuhlanjululwa igesi, inwebu ukungcola nitrogen (oksijini) izixhobo, ngumkhenkce dryer, micro ubushushu okungenisa dryer, isomisi heatless okungenisa, ubushushu wokomisa okungenisa, yecebo lokucoca kwaye ezinye ezilishumi uthotho kwemigaqo. Iimveliso ezisetyenziswa kakhulu petroleum, petrochemical, ugesi, ishishini lwekhemikhali, ishishini yokunyibilikisa isinyithi, ishishini amalahle, ishishini lamachiza, aerospace, Ushishino lweemoto, kushishino lwee-plastiki, imichiza ifayibha, irabha, ishishini iglasi, icandelo lokutya, ushishino elektroniki kunye nofuyo kunye namanye amacandelo .
Inkampani ibekwe Fuyang Gaoqiao Industrial Park, kufutshane Hangzhou West edikeni, Fuchun umlambo, Qiandao edikeni kunye nakwezinye iindawo zesizwe iimfuno.
Company kakhulu: ukholo okulungileyo ufuna ukuba nophuhliso lobulunga okulungileyo ufuna ukuba lophawu, inkolelo okulungileyo ufuna ukuba nkonzo.
inkonzo yethu inkolelo: ngokwaneliseka na awasukela obungunaphakade kwishishini ngayo!